गुल्मीमा प्रदिप र चन्द्र दुबैले भने: ” हार-जित जे भए पनि जनताको फैसला मान्छौ” – Gulminews
Home/निर्वाचन अप्डेट/गुल्मीमा प्रदिप र चन्द्र दुबैले भने: ” हार-जित जे भए पनि जनताको फैसला मान्छौ”
गुल्मीमा प्रदिप र चन्द्र दुबैले भने: ” हार-जित जे भए पनि जनताको फैसला मान्छौ”
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ मंसिर २२, शुक्रबार १९:४३ मा प्रकाशित
गुल्मी, मंसिर २२ । मतगणना सुरु हुनु भन्दा धेरै अघिबाट सँगै घाम तापेर एउटै पार्टीका नेता जस्तै बनेका दुई प्रतिस्पर्धी गुल्मी क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधी सभा उम्मेदवार प्रदिप ज्ञवाली र चन्द्र भण्डारीले जनताको फैसला नै सर्वस्वीकार्य रहेका बताएका छन् ।
मतगण्ना स्थलमा पुगेका सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नेता एबं गुल्मी क्षेत्र नं. १ का बाम गठबन्धनका उम्मेदवार ज्ञवालीले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको परिणाम जस्को पोल्टामा आएपनि लोकतन्त्रको जित हुने बताए ।
ज्ञवालीले अब जनताले फैसला गरेर पठाएकाले आफु जितको आशावादी रहेको बताए । त्यस्तै सोहि क्षेत्रका काँग्रेस नेता एबं उम्मेदवार चन्द्र भण्डारीले जनताले गरेको फैसला सहजता पूर्वक लिने बताए । राजनिति गर्ने कर्मीका लागी जितहार भनेको नियमित प्रक्रिया जस्तै भएको बताए । जनताले धेरै मेहनत र रगतको खोलो बजाएर ल्याएको संबिधानको कार्यन्वयन चरणमा भएको बताए । उनले स्थानिय प्रदेश र प्रनितिधि सभाको निर्वाचनले देसले जित्ने बताए । भण्डारीले संबिधानको कार्यन्वयनको चरण भएकाले ब्यक्तिले भन्दा पनि लदेसले जित्ने जोड दिए